Ngoku ungathatha iifoto uye enyangeni ngeXiaomi Mi 9 SE enkosi kuhlaziyo olutsha | I-Androidsis
UXiaomi uqhubekile kule minyaka mibini idlulileyo yokuphucula useto lwekhamera kwiifowuni zalo.
El Xiaomi Mi 9 SE Umzekelo ocacileyo womsebenzi omkhulu owenziwe licebo lokubonelela ngemodyuli elungileyo yokufota kumacala omabini, ngasemva, enekhamera kathathu, nangaphambili, enesandi esinye . Kwaye ngoku, enkosi kuhlaziyo olutsha lwe-MIUI, isixhobo siyakwazi ukuthatha imifanekiso yenyanga.
Ngokweenkcukacha, Uhlaziyo olutsha olwenziwe nguXiaomi kwi-Mi 9 SE luzisa imowudi entsha yeNyanga, phakathi kwezinye izinto. Inombolo yenguqulo ehlaziyiweyo yi-MIUI V10.3.10 kwaye, njengoko igama lisitsho, imo yeNyanga (ngeSpanish) ivumela abasebenzisi ukuba bafake iifoto zenyanga kwi-Mi 9 SE.
Uhlaziyo olutsha lwe-MIUI 10 ekuvumela ukuba uthathe iifoto zenyanga kwiXiaomi Mi 9 SE
Sebenzisa umsebenzi, vula nje usetyenziso lwekhamera, jolisa enyangeni emva koko uvule ikhamera ye-AI. Emva koko chukumisa iscreen ukuze ujolise, kwaye uhlengahlengise into yokusondeza kumaxesha ama-4 okanye nangaphezulu. Ikhamera izakuqonda ngokuzenzekelayo kwaye ibonise ukuba ungene kwimowudi yenyanga. Okwangoku, betha iqhosha lokubamba kwaye uya kucoca umlilo ococekileyo wenyanga.
Olona loncedo lukhulu kule ndlela kukuba awudingi kugxila kubhalo kwaye usete ngesandla i-ISO, kunye neshutter. Ke ngoko, nkqu nomqali ngaphandle kolwazi lwangaphambili lokufota unokufaka umfanekiso ocacileyo wenyanga amawaka eekhilomitha kude nekhamera ye-smartphone.
Ukuseta ikhamera ye-Mi 9 SE phantse kufana naleyo ye-Mi 9Ke ayimangalisi into yokuba eli nqaku lenza imodeli yoluhlu oluphakathi. Ukukhumbula, endaweni yecala elingasemva iMi 9 SE ibandakanya i-586 MP ye-Sony IMX48 ebanzi yeelensi engile + i-8 MP yeefowuni zelensi kunye neelensi ezibanzi ezingama-13 MP ngasemva.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Ngoku ungathatha iifoto uye enyangeni ngeXiaomi Mi 9 SE enkosi kuhlaziyo olutsha